Nuti nagaya feenaaf Nagayaan himannee Saniinis dadhabnee, Jumlaan ajjeefamnee Jarri nagaya hin feetu Agarree hubannee Tarkaanfii itti aanuuf Murannoon qophooyne. – Welcome to bilisummaa
Nuti nagaya feenaaf Nagayaan himannee Saniinis dadhabnee, Jumlaan ajjeefamnee Jarri nagaya hin feetu Agarree hubannee Tarkaanfii itti aanuuf Murannoon qophooyne.
Kan nagaya hin feene
Humaa irraa hin eeynuu
Tarkaanfii itti aanu.
Ni beekan duraanuu
Waliin dhumna malee
Wilii hin callifnu!
Kan nu miidhe miidhuu,
Kan nu ajjeese ajjeesuu,
Namuu waan qabu
Kennuun waliif raabsuu,
Kan qabeenya qabu
Kan dandeeytii qabu
Kan qabne leenjisuu,
Sanuma qofa amma
Karaan nu baasu!
Kan beekkomsa qabdan
Nutti hin qusatinaa!
Kan qabeenya qabdan
Namuu waan qabdaniin
Namuu haa ka’u
Shakkii takka malee
Diina irra aanna!
Previous Kallacha Walabummaa Oromiya/KWO Front for Independence of Oromia/FIO
Next August 6 Massacre throughout Oromiya by the TPLF Fascist regime will not prevent the